Iindaba -Izibonelelo zokuzilungelelanisa ngokwakho ibhola ethambisa ukuthambisa
Izibonelelo zokuzilungelelanisa ngokwakho ibhola ethambisa ukuthambisa
Sonke siyazi ukuba iibhloko zebhola ezizimeleyo kufuneka zibe ne-lubrication eyaneleyo ukuze kuqinisekiswe ukusebenza okuthembekileyo kunye nokuthembekileyo kokuthwala. Emva kokuthambisa, ukusetyenziswa kokuthwala kuya kuphuculwa, kwaye kufanelekile kulondolozo kunye nokusebenza. Kodwa kusekho abantu abaninzi abangazaziyo ukuba zeziphi izibonelelo zokuthambisa ngokusetyenziswa kweebheringi zokuzilungelelanisa ngokwakho? Emva kokushwankathela, kuyaziwa ukuba iibheringi zokuzilungelelanisa ziya kuba nezibonelelo ezininzi emva kokuthanjiswa. Kubonakala ngathi ukuthambisa ajikeleze kuluncedo olukhulu ekusebenziseni iibheringi.
Izibonelelo zokuzilungelelanisa ibhola ukuthambisa ukuthambisa:
1. Thintela okanye unciphise ukudibana ngqo kwesinyithi phakathi kwezinto eziqengqelekayo, iindlela zendlela kunye neekheyiji kwindawo yokuphelisa ukunciphisa ukungqubana kunye nokunxiba;
2. Kwenziwa umboniso weoyile kumhlaba wokungqubana. Xa kusenziwa ifilimu yoxinzelelo lweoyile, indawo yokuthwala indawo yeenxalenye inokunyuswa, kungalunciphisa uxinzelelo lokunxibelelana kwaye kwandise ubomi bokukhathala bokuqengqeleka komfowunelwa;
3. Lubricant iye anti-umhlwa kunye neziphumo anti-umhlwa
4. Ukuthanjiswa kweoyile kukwanesiphumo sokususa ubushushu kunye nokususa amasuntswana okuwohloka okanye ukungcola okungangenekiyo okuveliswe ngexesha lokusebenza kwebheringi;
5. ukuthambisa ajikeleze kungandisa ukusebenza uphawu nokuthintela ukungena kokungcola zangaphandle;
6. Inesiphumo esithile sokunciphisa ukungcangcazela nengxolo.
Ungacingi ukuba ukuthambisa kuya kuzisa inzuzo kwibhola yokuzilungelelanisa, akunjalo. Kwiimeko ezininzi, kukho ukuthambeka okungavumelekanga kweebherana zokuzilungelelanisa ngokwakho akuncedi kuphela, kodwa kuya kuzisa iingxaki. Ke ngoko, xa sithambisa i-ball yokuhamba-ungqamanisa ngokwakho, kufuneka sijongane nayo ngokwemeko ehambelana nayo, kwaye inokusebenza ngesiqhelo emva koqinisekiso.